30 sano ee GIF-dii ugu horeysay, yaa fikiri lahaa | Abuurista khadka tooska ah
Tixdan sawiro dhaqaaqa oo lagu soo celinayo loop ayaa leh magaca GIF oo sanadkan 2017 uu u calaamadeeyay 30 sano tan iyo markii uu soo muuqday, oo lagu soo celiyay 1987, qaab fudud oo loogu talagalay isku xirnaanta waqtigu lahaa iyo sidoo kale aad ayey caan uga noqotay internetka iyo inay u wada xiriiraan dadka isticmaala baraha bulshada ilaa maantadan la joogo.
Sannadkii 1986-kii horumarintii GIF ayaa bilaabatay shirkaddii markii hore ku bilaabatay abuuristeeduna waxay ahayd CompuServe, kaas oo awood u yeeshay inuu adeegyo aasaasi ah ku bixiyo internetka oo u oggolaaday dadka isticmaala inay helaan qolalka lagu sheekeysto, fagaareyaasha ama macluumaadka keydka iyada oo loo marayo modemyada ay lahaayeen.
GIF wuxuu noqday mawduuca dooda qaar ka mid ah xilliyadiisii ​​nololeed ee ugu horreeyay
Tani farsamada riixo Waxaan isticmaali jiray 1985 waxaa soo bandhigay warshadaha Unisys, oo ah markii CompuServe ay sheegeen inaysan ka ogayn arintaas. Mana dhicin ilaa 1994 oo ahayd goorma labadan shirkadood ayaa isku keenay oo shirkadda Unisys ayaa ku dhawaaqday taas waxay ahayd inay oggolaadaan isticmaalka qaab shati leh oo lagu beddelayo qaddar yar guryaha ganacsiga.
Qofka bilaabay inuu kuwan sameeyo sawiro dhaqaaqa ama GIF, wuxuu u sameeyay sidii loo soo bandhigi lahaa sawirro taagan oo waxay ahayd injineer Steve Wilhite. Sidan oo kale, maamulihiisa Sandy Trevor wuxuu rabay inuu ka caawiyo sidii uu u xallin lahaa labada dhibaato ee ugu waaweynaa ee xilligaas haystay.
wilhite sameeyay GIF oo ku saleysan borotokool isdabamarin taasi ma abuurin khasaaro magaca Lempel-Ziv-Welch (LZW), iyadoo maareynaysa inay yeelato bishii Meey 1987 noockeedii ugu horreeyay ee gebi ahaanba diyaar ahaa, kaasoo ahaa sawirka diyaarad.
Kahor intaanu Sir Tim Berners-Lee ikhtiraacin World Wide Web Ka dib markii biraawsarka Mosaic uu ka dhigay mid aad caan u ah, GIF wuxuu sameeyay muuqaalkiisa laba sano ka hor, sidii ay doonayeen inay sameeyaan, dabcanna waxay ku guuleysteen inay soo bandhigaan sawirro macluumaad iyo jaantusyo kayd ah oo leh cabirka faylka oo yaraaday.
Si kastaba ha noqotee, laga soo bilaabo 1994 ilaa 1995, waxay ahayd xilligii dadka adduunka ku baahsan waxay bilaabeen inay soo saaraan bogag iyaga u gaar ah bogagga sida 'Geocities', oo keenaya waxa loo yaqaan 'GIF craze moment', sidaas darteed qaabka leh samee sawirro firfircoon qaab wareeg ah waxay noqotay lama huraan sanadahaas hore.
Intii lagu gudajiray 90-meeyadii iyo qarnigii XNUMX-aad, waxaa kordhay Jiqda, oo ay weheliso sababihii matalay iyo keenaya GIF inuu si joogto ah ula xiriiro madadaalo.
GIF-ka waxaa soo rari kara mid ka mid ah kuwa waqtiga ugu horreeya naqshadeeyayaasha bogga shabakadda waqtiga, iyadoo la adeegsanayo modemyadii 56k ee hore, in yar oo waqti dhiman ah.
Si kastaba ha noqotee, ifafaalaha fiditaanka GIF, wuxuu lahaa dhammaad sida ugu dhaqsaha badan bilowgiisii ​​waana in sannadihii ugu horreeyay qarnigii XXI, sida naqshadda shabakaddu isu beddelayso, animationsyadani way sii luminayeen, marka laga reebo xaqiiqda ah in 1997 iyo 1998 shatiyada GIF ay dhacday, taasoo keeneysa horumariyayaal kale oo dijitaal ah sida Olia Lialina, fursad u hel inaad baarto shaqooyinka qaabkan iyo shaqadooda dhammaantood darteed, waxay ku guuleysteen inay badbaadiyaan GIF iyaga oo u rogay qaab leh feejignaan dheeri ah, oo ah habka isgaarsiinta muuqaalka ah.
Si kastaba ha noqotee, iyadoo la tixgelinayo wax kasta oo dhacay, GIF wuxuu ku guuleystay inuu ku sii jiro internetka. In kastoo loogu talagalay dadku waxay jecel yihiin Adam Leibsohn iyo shirkadaha sida agaasimaha guud ee shirkadda Giphy, wuxuu u taagan yahay qaab caasinimo, maaddaama ay dadka isticmaala siineyso suurtagalnimada inay ku daabacaan sawirradan meelihii aysan ahayn inay joogaan.
In kasta oo ay jiraan wax walba iyo maanta, GIF ayaa dib u soo ceshatay sababo la xiriira barnaamijyada badan ee laga helo internetka. Shabakadaha bulshada ee caanka ah sida Facebook iyo Twitter iyo warbaahinta ballaaran sida Buzzfeed ayaa hirgaliyay isticmaalkeeda.
Oo ka faa’iideysanaya taas GIF wuxuu noqonayaa 30, waxaan ku magacaabeynaa kuwa ugu caansan sida Michael Jackson oo cunaya saloolka iyo Kermit raha oo si ba'an u qoraya makiinada wax lagu qoro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » 30 sano ee GIF ugu horeysay, yaa oran lahaa
Waxyaabaha looga fogaado naqshadeynta markaad la shaqeyneyso qoraalka